Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » CTO: Hitohy ny Konferansa fizahan-tany maharitra any Karaiba, niova ny fandaharam-potoana noho ny Tropical Storm Dorian
The Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) sy ny St.Vincent ary ny Grenadines Tourism Authority (SVGTA) dia nanara-maso ny fivoarana manodidina ny Tropical Storm Dorian manoloana ny Konferansa Karaiba momba ny fampandrosoana maharitra ny fizahan-tany - raha tsy izany dia fantatra amin'ny hoe Fihaonambe maharitra momba ny fizahan-tany - kasaina hatao eto amin'ity herinandro ity.
Manoloana ny tafio-drivotra miandry sy ny fanafoanana ny sidina vokatr'izany ny Alatsinainy 26 Aogositra, ny CTO sy ny SVGTA dia maniry ny hanome torohevitra fa hiroso ny fihaonambe. Na izany aza dia hanomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny alarobia 28 aogositra izao ny fihaonambe fa tsy ny talata 27 aogositra, ka ny alarobia 28 sy alakamisy 29 aogositra no hanaovana ny fivoriana ankapobeny. Ireo fitsangatsanganana an-tsokosoko, nokasaina hatao ny zoma 30 aogositra lasa teo dia hitohy araka ny kasaina.
Ny CTO sy ny SVGTA dia manenina noho ny tsy fanelingelenana naterak'ireo fanovana ireo ary hanohy hanara-maso ny toe-javatra ary hanome torohevitra raha misy fiovana hafa. Halefa amin'ny www.caribbeanstc.com sy www.onecaribbean.com ny fanavaozana.
Lufthansa dia mitady hevitra momba ny fanavaozana maharitra amin'ny Travel and Mobility